Nkọwa nke ebili mmiri Siberia nke dakwasịrị Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Nkọwa nke oke oyi Siberia nke dakwasịrị Spain
Portillo nke German | | Ebili mmiri oyi
Na oyi na-atụ snap na anyị si na Siberia pụta na-eru ebe kachasị elu na Spain niile. Banyere ihe ndekọ okpomọkụ, ha na-erute karịsịa ala na-abụghị nke nkịtị.
Ọbụghị naanị oyi, mana mmiri ozuzo na ikuku na-atụnye ụtụ na ikuku oyi a na-ewetata snow ọnọdụ na-atụghị anya ya ebe. Ka anyị leba anya na nkọwa gbasara oyi Siberia a.
1 Okpomọkụ dị n'okpuru efu
2 Snow etoju
3 Fọdụ ịdọ aka ná ntị megide ihu igwe na-adịghị mma
4 Mmụba na oriri eletrik
Okpomọkụ dị n'okpuru efu
N’obodo ụfọdụ dị na Lleida, ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ adịwo ala nke na ọ ruru -12 degrees. Igwe ndị ọzọ dị ala na-apụta, dị ka nke kachasị na ọdụ Lleida-Bordeta, ebe edere ọnọdụ okpomọkụ nke -7,4 degrees. Otú ọ dị, ndekọ dị ala nke ụbọchị dị na Catalonia, akara ya Das, na La Cerdanya, na -21,6 ogo.
Dabere na Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na steeti, mpaghara atọ nke Aragon, Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria, Zamora, Girona, Lleida, Navarra, La Rioja, na Asturias ga-anọ na ịdọ aka ná ntị oroma (ihe egwu dị mkpa) n'ihi obere okpomọkụ. Ha nwekwara ịdọ aka ná ntị maka ihe egwu dị mkpa na Balearic Islands n'ihi ọwụwa anyanwụ nke ga-afụ na Mallorca na Menorca na-ewepụta ihe ndị dị n'ụsọ oké osimiri, dịka na Girona, na ịdọ aka ná ntị oroma maka otu ihe a, ebe ọ bụ na a na-atụ anya ifufe siri ike na oke ikuku siri ike na Empordà.
Igwe mmiri a dị obere nke mere na snow erutela n'ụsọ osimiri Alicante ma kpuchie ọchịchị dị ka Dénia na Xàbia na-acha ọcha, ma duga n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ Les Planes, nke jikọtara obodo abụọ ahụ na Montgó. Edebeghị ụdị snowfall a kemgbe 80s.
Fọdụ ịdọ aka ná ntị megide ihu igwe na-adịghị mma
Ndị ọchịchị nke ime obodo ndị nwere okpomọkụ na-ajụ oyi ma na-ajụkarị oyi ewerela ụgbọ nke gị ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa, n'ihi na ha nwere ike ịkpata ihe egwu na nsogbu na mgbasa. N'ime obodo Dénia, a kwụsịla klaasị n'ụlọ akwụkwọ.
Mmụba na oriri eletrik
Mmiri oyi na Spain emeela ka ọkụ eletrik dịkwuo ọkụ. Nke a emeela ka njedebe a na-erubeghị kemgbe 2012. Na Catalonia, oriri eletrik amụbawo site na 7% n'ihi oke oyi ebe ọ hapụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo niile na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru ogo efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » Nkọwa nke oke oyi Siberia nke dakwasịrị Spain
Kedu ihe bụ cyclones
Mmiri mmiri oyi na-emetụta mgbanwe ihu igwe?